Iyo yakanakisa kota munhoroondo yeApple inosvika nekutenda kune iyo iPhone X | IPhone nhau
Iyo iPhone X haisati yatengesa zvakanyanya sekudai iyo Cupertino kambani ingade, Ndicho chinhu chatiri kujekesa nekuti hazvisi zvekuti zvakawandisa zvinoonekwa mumugwagwa uye "boom" yemazuva ekutanga ekutengesa yakagara zvishoma. Nekudaro, iyo yapfuura yatora dzimwe nhoroondo dzehupfumi.
Sezvo yakatangwa neruoko rwezvinyorwa zviviri zveiyo iPhone 8 inogona kuve nezvakawanda zvekuita nazvo. Uye ndizvozvo Yakabatana ne € 1.100 iyo yega yega X X inodhura, Apple yakwanisa kuzadzikisa izvo kusvika parizvino chikamu chayo chakanakisa chemari munhoroondo. Dzimwe nhamba dzinojekesa kuti Apple iri mupenyu kupfuura nakare kose.
Aya ndiwo magwaro ezvemari anojekesa kuti Apple yakaputsa rekodhi yazvino ye $ 78.400 bhiriyoni, parizvino ichisiya pasina kana zvishoma 84.000 mamirioni emadhora, zvichijekesa kuti musanganiswa wakaringana pakati pekupa software, kutenderera uye zvigadzirwa zvinobva pamwe nekugadzirwa kwemidziyo yevatengi emagetsi yave iri yakajeka uye yakavimbika bheji yekusiyanisa kwezvinhu zvayo. Nekudaro, Apple yawana mambure purofiti kubva kune ayo mashandiro einosvika makumi matatu nemasere muzana ezere kudzoka. Icho chimiro chisati chamboonekwa mumabhuku ekuverenga eiyo Cupertino kambani munhoroondo yayo yese, saka tinozivisa kuti Apple hairegi kukura.
Izvo zvakakosha kusimbisa mhedzisiro yemasevhisi seApple Music kana kunyorera Mukati meaya manhamba, sezvo iwo asingamiri kukura, ndiko kuti, pasina kana kufukidza kutengeswa kweiyo iPhone sechinhu chikuru chekukurudzira hupfumi, asi pamberi pemamwe matunhu akadai seiyo iPad uye kunyangwe iyo inenge yanyangarika iPod, sezvataigona kufungidzira. Iyo Mac inosara, ine nyonganyonga asi yakakura kukura, ndiko kuti, iyo Mac iri zvakare kure kure nekufa, kure neizvo vaongorori vanga vachifanotaura makore mashoma apfuura. Nekudaro, isu tinogona kupupura tichitenda kune manhamba ayo MacRumors akagovana, kuti isu tiri kunyatso kutarisana neinobatsira kwazvo kota yemari yekambani yeCupertino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo yakanakisa kota munhoroondo yeApple inosvika nekutenda kune iPhone X
hutsi hwakawanda uye kana chiri chokwadi kuti nekuda kweX vane mabhenefiti mazhinji, zvinongobvumikisa kuti kugadzira kunovadhurira zvakafanana nevekare, izvo zvandisina kukahadzika. Asi chimwe chinhu zvakare ichokwadi, pano iye chete anokonzeresa mutengi, zvichemo zvekuwedzeredza mutengo zvakakosha m ...